Shiinaha Ultimate Copper Aluminium Beddelka 20Khz 3000w Alxanka loogu talagalay Soosaarka Mootada iyo Soosaarayaasha iyo Warshad | Qianrong
Ultimate Copper Aluminium Beddelka 20Khz 3000w Alxanka Mashiinka iyo Transformer
Shayga No QR-X2020A QR-X2030A QR-X2040A
Awood 2000W 3000W 4000W
Alxanka Aagga 0.5-16mm2 0.5-20mm2 1-30mm2
Cadaadiska Hawada 0.05-0.9MPa 0.05-0.9MPa 0.05-0.9MPa
Joogtaynta 20KHZ 20KHZ 20KHZ
Danab 220V 220V 220V
Miisaanka geeska 18KG 22KG 28KG
Cabirka Geeska 530 * 210 * 230mm 550 * 220 * 240mm 550 * 250 * 240mm
Cabirka Generator 540 * 380 * 150mm 540 * 380 * 150mm 540 * 380 * 150mm
Qalabka alxanka Xiinka alxanka wuxuu adeegsadaa hirar aad u sarreeya oo ruxrux ah si uu ugu gudbiyo dusha sare ee labo xarig oo xarig ah oo silig lagu xiro. Cadaadiska hoostiisa, dusha sare ee labada xarig ee siligga siligga ah ayaa la isku xoqayaa si loo sameeyo isugeyn u dhexeysa lakabyada kelli. Faa'iidada ayaa ah inay tahay dhakhso iyo tamar-badbaadin. Awoodda isku dhafka sare, habsami u socodka korantada, dhimbiil la'aan, oo u dhow ka shaqeynta qabowga; Faa’iido darrada jirta ayaa ah in qeybaha birta ee alxanka leh aysan noqon kuwa aad qaro weyn (guud ahaan ka yar ama u dhigma 5mm), kala goysyada alxanku waa inaysan aad u weyneyn, oo ay u baahan yihiin in la cadaadiyo.
Mashiinnada alxanka dhejiska siligga Ultrasonic uma baahna qulqulka iyo kululaynta dibedda, kuleylka kuma liicsana, ma laha culeys walbahaar ah, waxayna u baahan yihiin daaweyn ka sii horreeya alxanka dusha sare ee walxaha. Ma aha oo kaliya biraha la midka ah, laakiin sidoo kale inta udhaxeysa biraha kaladuwan waa la alxan karaa. Waraaqaha ama fiilooyinka ayaa lagu dhejin karaa boodhka. Alxanka Ultrasonic ee hagayaasha korantada wanaagsan ayaa aad uga yar tamarta marka loo eego alxanka hadda jira waxaana caadi ahaan loo isticmaalaa in lagu sii daayo hoggaamiyeyaasha transistors ama wareegyada isku dhafan. Markii loo isticmaalo in lagu shaabadeeyo alxanka dawooyinka iyo walxaha qarxa, waxay ka fogaan kartaa alxanka guud ee dawooyinka wasakhaysan sababo la xiriira walxaha milmay, mana qarxi doono kuleylka dartiis. Waa adeegsiga mowjadaha ultrasonic si loo dhejiyo fiilooyinka birta ah. Waxay ka kooban tahay sanduuqa awoodda, transducer, martida pneumatic iyo madaxa qalabka. Intaa waxaa sii dheer, qaybaha xakamaynta sida xarumaha, aaladaha la maro, iyo microprocessors ayaa lagu daray. Sanduuqa awoodda ayaa u rogaya korantada caadiga ah ee caadiga ah (~ 220V, 50 ama 60Hz) 20000Hz (20KHz), danab ka badan 1 volt, ka dibna waxaa xukumaya sanduuqa awoodda si loo soo saaro oo looga shaqeeyo transducer-ka. Transducer waa qayb ka mid ah korantada waxtarka badan oo tamarta korantada u rogeysa tamar farsamo. Marka la barbardhigo matoorrada caadiga ah, waxaa jira laba kala duwanaansho weyn oo u dhexeeya transducers: marka hore, transducer wuxuu u beddelaa tamarta korantada gariir toosan halkii uu ka wareegi lahaa; marka labaad, waxay u shaqeysaa si aad ufiican waxayna u badali kartaa 95% tamarta korantada. Ka dib beddelka transducer ka dib, tamar farsamo ayaa lagu dabaqayaa madaxa alxanka. Geeska ultrasonic wuxuu ka sameysan yahay daawaha titanium waxaana loo farsameeyay qaab gaar ah iyadoo loo eegayo mabaadi'da austustka si loo hubiyo in ugu badnaan la wareejiyo tamarta .c
Marka koronto-dhaliyuhu soo saaro qaylo-dhaan xad dhaaf ah, waa in loo hubiyaa sida soo socota
1. Tijaabin la'aan-xamuul ah, haddii shaqada hadda socotaa ay caadi tahay, waxay noqon kartaa in madaxa alxanka uu xiriir la leeyahay shayga aan la taaban karin ama iswaafajinta cabbirka u dhexeeya madaxa alxanka iyo kursiga alxanka uu khaldan yahay.
2. Marka baaritaanka culeyska uusan caadi aheyn, marka hore u fiirso inuu jiro dildilaac madaxa alxanka, haddii rakibiddu ay adag tahay, ka dibna ka saar madaxa alxanka oo qaado baaritaanka culeyska si aan u baabi'in haddii ay dhibaato jirto transducer + geeska, oo tirtir talaabo talaabo. . Ka dib markaad baabi'iso suurtagalnimada fashilka transducer + geeska, beddel geeska cusub si loo go'aamiyo.
3. Mararka qaarkood waxaa jira xaalad tijaabada ah in aan rar la qaadin ay caadi tahay, laakiin si caadi ah uma shaqeyn karto. Waxay noqon kartaa in qaybaha gudaha ee tamarta acoustic sida madaxa alxanka uu isbedelo, taasoo keentay gudbinta tamarta codka oo liidata. Halkan waa habka xukunka fudud: habka taabashada gacanta. Madaxa alxanka caadiga ah ee shaqeynaya ama dusha geesku waa mid isku mid ah marka la shaqeynayo, gacantuna waxay dareemeysaa jilicsanaan jilicsan. Marka tamarta codku aysan fiicnayn, gacanta ayaa dareemeysa sida xumbo ama nabarro. Hababka ka-saarista waxaa loo isticmaalaa in lagu baabi'iyo qaybaha dhibaatada leh. Xaalad la mid ah ayaa dhici karta marka matoorku caadi ahayn, maxaa yeelay sida caadiga ah wareejinta wareejinta wareejiyaha waa inuu noqdaa mawjad yar oo sine ah, taas oo sidoo kale dhici karta marka ay jiraan wareegyo ama qaabab aan caadi ahayn oo ku saabsan mowjadda sine. Waqtigaan, cunsur acoustic acoustic kale ayaa lagu beddeli karaa takoor.
Hore: Looxaqiijiyay 3000 Watt Roll Ultrasonic Birta Alxanka loogu talagalay Unugyada Cadceedda ee Fudud Aluminium Copper Pipe Panel
Xiga: 4200w Awood Sare 15Khz Ultrasonic Plastik Mashiinka Alxanka oo leh Nidaamka Xakamaynta Muddada
Caqli 15Khz Xiinka Generator Digital ...
3000W Xawaaraha Sare 20Khz Xiinka Copper ama ...
Dejinta Sare 70Khz Dhamaan Qalabka Ultimate V ...
Nooca Tiirka 30Khz 700w Ultrasonic Transducer ...
Awood Sare 15Khz 2600w Xiinka Alxanka Trans ...